पाँच दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन स्थगित - Everest Dainik - News from Nepal
पाँच दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन स्थगित
२०७७, ६ कार्तिक बिहीबार
काठमाडाैं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-१९ का बारेमा जानकारी दिन गरिने नियमित पत्रकार सम्मेलन पाँच दिनका लागि स्थगन गरिएको छ ।
बडादसैँका कारण पत्रकार सम्मेलन यही कात्तिक ७ देखि कात्तिक ११ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अब कात्तिक १२ गतेदेखि हुने नियमित पत्रकार सम्मेलन थप परिमार्जनसमेत हुने बताए । उनले कोभिड-१९ का बारे भने सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी गराइने पनि बताए ।
याे पनि पढ्नुस कहाँ-कहाँ थपिए आज कोरोना संक्रमित? (विवरणसहित)
मन्त्रालयले दुई सय ५६ दिनदेखि लगातार नेपालमा कोभिड-१९ का बारे नियमित पत्रकार सम्मेलनबाट जानकारी गराउँदै आएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा एक लाख ४८ हजार ५ सय ९ संक्रमित भइसकेका छन् भने ८ सय १२ जनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कुन-कुन जिल्लामा थपिए आज कोरोना संक्रमित? (सूचीसहित)
यस्तै एक लाख दुई हजार ८ सय २० जना संक्रमणबाट निको भएको र ४४ हजार ८७७ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । रा
ट्याग्स: पत्रकार सम्मेलन, स्वास्थ्य मन्त्रालय
तत्काल शुरू हुँदै रोकिएको कोरिया जाने प्रक्रिया
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री जमालीको निधन
एन्फाद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि ५८ खेलाडी छनोट (सूचीसहित)
सिमकोट विमानस्थलको कर्मचारी बस्ने घरमा आगलागी
बालिका बलात्कारकाे अभियाेगमा १५ वर्षीय किशोरलाई साढे १२ वर्ष जेल सजाय
जन्ती बाेकेकाे गाडी दुर्घटना: बेहुला बेहुलीसहित १३ जना घाइते